भिलेन फ्लेभरका एसपी राना : छन्त्यालको स्वागत, बतासको बिदाई ! – Tandav News
ताण्डव न्यूज द्वारा	 २०७६ जेष्ठ १४ गते मंगलवार ११:२१ मा प्रकाशित
अहिलेका कास्की प्रहरी प्रमुख ओमबहादुर राना मात्र यस्ता पात्र हुन जो आउदा पनि चर्चामा थिए र जादा पनि चर्चामा छन् । त्यो पनि सकारात्मक रुपले होइन आलोचित भए । पोखरा आउन साथ यहाँका टोले गुण्डासँगको सम्बन्ध र जाँदा किलो २ अर्थात डिएसपी रवीन्द्रमान गुरुङले अटेर गर्छन् भनेर उनी चर्चामा रहे ।
कास्कीका तत्कालिन एसपी अशोक सिंहलाई महानगरीय विशेष सुरुक्षा महाशाखामा सरुवा गर्यो । सोही निकायका एसपी ओमबहादुर राना सिंहको स्थानमा सरुवा भएर आएका थिए राना । ०७५ बैशाख ३० गते देखि नै ‘किलो वान’ को जिम्मा सम्हाल्ने गरि एसपी राना जिल्ला प्रहरी कार्यालय आए । एसपी सिंहलाई पनि सोही दिन बिदाइ गरिएको थियो । किलो वान जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको कल साइन हो ।
इन्ट्रीमै भिलेन फ्लेभर
कार्यभार सम्हाल्न कास्की टेक्ने बित्तिकै एसपी रानाको आलोचना भयो । कथित टोले गुण्डा धनबहादुर छन्त्यालले खादा लगाइदिएको हल्ला बाहिरिएपछि एसपी रानाको पसिना पोखराको चिसो हावाले ओभ्याउन सकेन । खादा मात्रै होइन,केही गाडीले विमानस्थलबाटै स्कर्र्टिङ गरेको कुराले इन्ट्री नै भिलेन स्टायलको बनिदियो ।
यसबारे गृह मन्त्रालयमा पनि कुरा पुगिसकेको थियो । गृह श्रोतका अनुसार २ महिनामै एसपी रानाको सरुवाबारे हल्ला पनि बाहिर आए । यी कुरा सत्य नै हुन् त ? भन्ने प्रश्नमा एसपी रानाले ताण्डव न्यूजसँग भनेका थिए ‘यी सबै हल्ला मात्र हुन् ।’
मुखमा छुरा, बगलीमा राम ! राम !
कास्की आइसकेपछि एसपी रानाले ०७५ असार २४ गते आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरे । गुण्डागर्दी विरुद्ध शून्य सहनशिलताका साथ एक्सनमा उत्रने उनको भनाई जोसिलो सुनिएको थियो । तर, उखान उल्टाइए जस्तै मुखमा छुरा बगलीमा राम राम देखिए उनी ।
आएको ५५ दिनमै उनले कार्यप्रगति सुनाउन पत्रकार डाकेका थिए । इन्ट्रिमै भिलेन फ्लेवर मिसिएर पनि हुनसक्छ, कार्यप्रगति सन्तोषजनक देखिएको थियो । गुण्डासँगको हिमचिमको बहस भने सेलाएको थिएन । पत्रकारमाझ उनले कास्की प्रहरीको गुण्डागर्दी निस्तेज अभियान अन्तर्गत १५ जना पक्राउ गरेको सुनाए ।
गुण्डागर्दी, हप्ता असुली, धम्की, मिटर व्याज, बेटिङ लगातका कार्यमा संलग्नहरुलाई पत्रकार सम्मेलनमै उभ्याएर फोटो खिच्न पनि लगाइयो । तर, गुण्डागर्दीमा को–को हुन् ? हप्ता असुली कसले गर्यो ? धम्की दिने को ? मिटर व्याजमा पक्राउ कसलाई गरिएको हो ? भन्ने प्रश्नमा उनी अनुत्तरित देखिए । एक्सनमा उत्रन खोजेका एसपी रानालाई यहि प्रश्नले फेरी पसिना छुट्यो ।
असार २४ गते केही अनलाइन मिडिया र २५ गते पत्रपत्रिकामा एसपी रानाको कार्यप्रगति पढ्दा पोखरेलीले आशाको स्वास फेरे । ‘खरो रहेछन् एसपी सा‘ब ’ भन्ने छाप बसाल्न सफल भए ।
मिटरमा जान नमान्ने ट्याक्सीलाई पक्राउ गरेर कारवाही पनि अघि बढाएका थिए । मिटरको कुरा लिटरमै अड्किरहेको छ अहिले पनि । ट्याक्सी व्यवसायीहरु लिटर डिजलको मूल्य सुनाएर, महंगीको उदाहरण दिएर मिटर ठप्प पारेको लामो समय भइसक्यो । कास्की आएका प्रहरी प्रमुखहरुको लागि टाउको दुखाइको विषय पनि हो यो ।
असार २४ गते नै उनले आफ्ना १२ बुँदे कार्ययोजनालाई निरन्तरता दिने बताएका थिए । गुण्डागर्दी निस्तेज, लागुऔषध, घरेलु हिंसा, मिटर व्याज, जुवातास, यौन व्यवसाय, अवैध मदिरा लगायतका अपराधिक कार्य निस्तेज पार्ने उनका १२ बुँदे मिसन थिए ।
यस्तै ट्राफिक व्यवस्थापन तर्फ अनियमितता, ट्राफिक लाइट, ओभर स्पीड कन्ट्रोल लगायतका विषयमा गम्भिर भएर लाग्ने उनको भनाई थियो ।
यो ३७८ दिनमा उनी गम्भिर भएमात्रै, व्यवहारमा त्यो देखिएन । हिट एण्ड रनमा मृत्युवरण गरेका ड्युटी खटिएका प्रहरी जवानलाई समेत उनले न्याय दिन सकेका छैनन् ।
त्यसो त ,०७५ जेठ २७ गते कथित टोले गुण्डा ललित गुरुङको ८३८६ नम्बरको आइलक्स गाडीमा एसपी राना मदिराले मस्त भएर लेकसाइड स्थित ओजोन डिस्कोमा पुगेको आरोप पनि लागेको थियो ।
एसपी र डिएसपीको कोल्ड वार
एसपी राना आइसकेपछि लागु औषध नियन्त्रण ब्युरो पोखराबाट बढुवा भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा डिएसपी आए रविन्द्रमान गुरुङ । डिएसपी गुरुङ कास्कीकै हुन् । आफ्नै बसोबास स्थान भएर पनि हुनसक्छ, उनमा केही दम्भ देखिन्थ्यो । केही जटिल केसहरु उनले एसपी समक्ष पु¥याउँदै पु¥याएनन् ।
विशेषगरी आर्थिक लेनदेनको मामला उनी एक्लै सल्टाइदिन्थे । व्यक्तिगत लेनदेनको कुरालाई लिएर डिएसपीले थर्काउने गरेको श्रोतले बतायो । ‘न प्रमाण देखाउ भन्दा देखाउँछन् । कानुनी रुपमा जाउँ न त भन्दा गाली गर्छन् । पक्राउ पूर्जी नभई, घर घेरेर अपराधी जसरी हिरासतमा लिए’ एक पीडितले गुनासो गरे ।
यस सम्बन्धमा एसपी राना बेखबर जस्तै देखिए । यसलाई उनीहरुबिचको कोल्ड वार अर्थात् शित युद्ध मान्न सकिन्छ ।
प्रवक्ता समेत रहेका डिएसपी गुरुङलाई प्रवक्ताको भुमिका ननिभाएको समेत आरोप लाग्यो । सूचनाका लागि फोन गर्दा फोन नउठाइदिने, सूचना लुकाउने जस्ता आरोप उनीमाथी लाग्दै आएको छ ।
‘फोन उठाउनुहुन्न रे नी तपाई ? के हो कुरा ?’ गत महिना पत्रकारहरु माझ एसपीले डिएसपीलाई बोलाएर सोधे । डिएसपी गुरुङले त्यतिबेला हातमा रहेको मोबाइल देखाउँदै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका थिए ‘यी यस्तो थोत्रो मोबाइल छ । कहिले अफ हुन्छ, कहिले के हुन्छ ।’
पोखरा २२ पुम्दी भुम्दीकी श्रीया बिकको हत्यारालाई २४ घन्टा नपुग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले पक्राउ गर्नु एसपी रानाको ‘नोटिसेबल वर्क’को रुपमा लिन सकिन्छ ।
यस्तै कास्की सिल्दुजुरे घर भई नयाँबजारमा बस्दै रहेका सूर्य पाण्डे हत्याको केस पनि अघि बढाए उनले । पाण्डेको चार वर्ष अघि हत्या भएको थियो । लागुऔषध कारोवारमा पनि उनको एक्सन सम्झनलायक छ ।
बतासको बिदाई !
छन्त्यालको खादा र स्कर्टिङमा पोखरामा स्वागत गरिएका एसपी रानालाई पछिल्लो समय बतास अर्गनाइजेसनका विपेन्द्रराज बताससँग सेटिङ मिलाएको आरोप छ । पत्रकार अर्जुन गिरीले बतासविरुद्ध समाचार प्रकाशन गरेपछि, हिरासतमा लिनका लागि उनीहरुबिच सेटिङ भएको आरोप लागेको हो ।
पक्राउ पूर्जी जारी भएको ४ दिनपछि पत्रकार गिरीलाई जिप्रका बोलाएर हिरासतमा लिइनु शंकास्पद देखियो । किन ४ दिन सम्म भनिएन ? प्रश्नको उत्तर दिँदै एसपी रानाले भनेका थिए ‘चाडबाड थियो । घरपरिवार सँगै हुनुहोला, किन दुःख दिने भनेर खबर गरेनौँ ।’
गिरी पक्राउ पछि देशैभर रिहाइ र प्रेस स्वतन्त्रताको मागसहित आन्दोलन चर्कियो । गिरी पक्राउ पर्नुअघि एसपी राना र वीपेन्द्र पोखरा टे«ड मलमा रहेको रेस्टुरेन्टमा भेटर कुराकानी गरेको एक पत्रकारले पत्रकार महासघको कार्यक्रममै खुलासा गरेका थिए । यस घटनालाई ‘पावर एण्ड मनी प्लानिङ’ अर्थात् बतासले पैसा र शक्ति देखाउनकै लागि एसपी रानासँगको सेटिङमा पक्राउ गरिएको आरोप छ ।
अहिले बतासलाई अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरिसक्दा पनि प्रहरीले पक्राउ नगर्नु उनीहरुबिचको निकटताको असर हो की, भन्ने आँकलन सुरु भएको छ ।
रक्तचन्दन, सुन तस्करी र घुस प्रकरण
राना रसुवाको डिएसपी हुँदा रक्तचन्दनको तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि अवधी पुग्नु अघि नै तानिएका थिए । रक्तचन्दन तस्करीको आरोपमा सेनाले एक कर्णेललाई कोटमार्सल गरि जागिरबाटै बर्खास्त गरेको थियो । तर, तत्कालिन डिएसपी रानाले भने उन्मुक्ती पाए । रक्तचन्दन बाहेक सुन तस्करीमा पनि उनी मुछिए ।
यस्तै, बौद्ध प्रहरी प्रमुख हुँदा रानालाई तिब्बतीहरुसँग घुस मागेको घटना पनि बाहिरिएको थियो । राना महानगरीय आयुक्त कार्यालयमा रहँदा रकम असुलीका कारण पनि बद्नाम भएका थिए ।